Alaabada nooleyn karta: astaamaha, adeegsiga iyo faa'iidooyinka | Dib -u -cusboonaysiinta Cagaaran
Jarmal Portillo | 14/09/2021 10:49 | Dib u warshadaynta
Waxaa soo wajahay dhibaatada ba'an ee adduunka oo dhan ee aan ku qabno wasakhda caagga ah, walxaha nooleyn kara. Waa agabyo burbura iyada oo ay ugu wacan tahay faragelinta noolaha sida fangaska iyo noolaha kale ee dabiiciga ah. Waad ku mahadsan tahay tan, kuma dhegaan dhulka ama dhexdhexaad kasta mana wasakheeyaan. Geedi -socodka kala -guurku wuxuu ka bilaabmaa bakteeriyada soo saarta enzymes -ka waxayna doorbideysaa in badeecada bilowga ah loo beddelo waxyaabo fudud. Ugu dambayn, dhammaan microparticles ciidda ayaa si tartiib tartiib ah loo nuugaa.
Sababtaas awgeed, maaddaama maaddooyinka baaba'ayn kara ay aad muhiim u yihiin, waxaan u hibeyn doonnaa maqaalkan inaan kuu sheegno wax walba oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato iyaga.
1 Waa maxay alaabta baaba'aysa
2 Noocyada walxaha baaba'a leh
2.1 Caagag ka samaysan istaarijka iyo galley
2.2 Baaskiil -kobcin kara iyo caagag dabiici ah
2.3 Waraaqaha iyo dharka dabiiciga ah
3 Faa'iidooyinka agabyada nooleyn kara
Waa maxay alaabta baaba'aysa
Agabyada nooleyn kara waxaa loo tixgeliyaa dhammaan agabyadaas oo qudhmay sababtuna tahay faragelinta fangaska iyo jeermisyada kale ee dabiiciga ah. Marka walax ay bakteeriyadu soo weerarto, geedi -socodka kala -guurku wuxuu bilaabmaa, kaas oo soo saara enzymes si uu gacan uga geysto u -beddelidda badeecadda bilowga ah ee walxaha fudud. Marxaladda ugu dambeysa waxay ka kooban tahay in si tartiib tartiib ah loo nuugo walxaha carrada.
Dhinaca kale, walxaha aan duugoobayn waxay ku hadhaan ciidda oo keliya waxayna burburiyaan nidaamka deegaanka ku xeeran. Inta badan agabyada synthetic -ka ee casriga ahi ma laha bakteeriya fududayn karta, sidaa darteed waxay sii ahaanayaan kuwo muddo sii jira, sidaasna ku wasakhaynaya deegaanka.
Nasiib wanaag, horumarka sayniska ayaa sidoo kale naga caawiyay arimahan, abuurista agab ahaan waara oo waxyeello leh oo beddeli kara kuwa hadda duugoobay oo waxyeello leh. Si looga hortago uruurinta xeryahooda aan nooleynin ee dabiiciga ahLaba xal ayaa hadda la baranayaa: iyadoo la adeegsanayo xididdada ama muruqyada microbial-ka ee weerari kara alaabooyinka loo arko inay yihiin kuwa aan baabba'ayn, ama soo-saaridda agab ay nooleyaasha ku noolaan karaan noocyo caadi ah.
Qaabkaas, uruurinta agabka maalin walba ka dhacaya meeraheena, oo dad badani aysan ka warqabin, waxay dhammaan kartaa hal mar ama dhammaan, ama aad bay u yareysaa baakadaha, waraaqaha, agabka, iwm. Uma baahnid inaad sugto dhowr sano ilaa ay ka baaba'do gebi ahaanba.
Noocyada walxaha baaba'a leh
Aynu aragno kuwaas oo ah kuwa ugu caansan oo si fiican loo yaqaan alaab-beddelidda
Caagag ka samaysan istaarijka iyo galley
Caagagga noolaha oo laga sameeyay galley ama qamadi ayaa hadda lagu soo saaraa heer warshadeed, tusaale ahaan in la sameeyo bacaha qashinka. Nabaad -guurka balaastikadaani waxay qaadan kartaa 6 ilaa 24 bilood, dhulka hoostiisa ama biyaha, taas oo ku xidhan xawaaraha lagu daray istaarijka.
Sidoo kale, balaastiigyo si buuxda u nooleyn kara oo laga sameeyay galley ama fiilooyin la cadaadiyey ayaa beddeli kara caagagga batroolka ku salaysan. Mid iyaga ka mid ah wuxuu ku salaysan yahay istaarijka galleyda wuxuuna ku yimaadaa qaab alaab granular ah oo loo isticmaalo in lagu sameeyo suxuunta. Isbedelka halabuurka iyo hannaanka caagagga, astaamaha farsamo sida cufnaanta, modulus laastikada, xoogga gilgilashada, isbeddelka waa la heli karaa, iwm. Astaamaha agabyadan ayaa aad ugu eg kuwa polymers -ka caadiga ah ee ka soo jeeda batroolka.
Baaskiil -kobcin kara iyo caagag dabiici ah
Kooxdan, waxaa jira noocyo ka mid ah polymer -ka isku -dhafka ah oo si dabiici ah hoos u dhigi kara ama ku dari kara walxo dardar gelin kara hoos -u -dhacooda. Balaastikadaas waxaa ka mid ah balaastikada oksijiin-noole la beddeli karo iyo poly (ε-caprolactone) (PCL). Balaastikada oksaydhka ee nooleyn kara waa caagag synthetic ah, kaas oo lagu daro waxyaalo kiimiko ah oo dhiirrigeliya oksaydhka ayaa lagu daraa halabuurka si loo bilaabo ama loo dardargeliyo geeddi -socodka hoos -u -dhiska oksaydhka si loo soo saaro alaab baaba'aysa. PCL waa polyester -ka kuleyliyaha kuleylka leh oo noole ah oo aan la wada socon karin oo loo adeegsado codsiyada caafimaadka.
Burooyinka dabiiciga ah ee dib -u -kicin kara, oo sidoo kale loo yaqaan biopolymers, ayaa laga soo saaraa ilaha la cusboonaysiin karo. Qaar ka mid ah alaabooyinka aan soo sheegnay waxaa ka mid ah polysaccharides ay soo saareen dhirta (istaarijka galleyda, kasaafada, iwm), polyester -ka ay soo saareen jeermisyada (inta badan bakteeriya kala duwan), caag dabiici ah, iwm.
Waraaqaha iyo dharka dabiiciga ah
Waxaan u isticmaalnaa warqad si gaar ah nolol maalmeedkeena, taas oo sidoo kale noqon karta maaddo baaba'aysa. Waa laga yaabaa shukumaano waraaqo ah, xafaayadaha, buugaagta wax lagu qoro, wargeysyada, waraaqaha boostada, bacaha warqadda kraft, rasiidhada, tigidhada baarkinka, taargooyinka warqadaha iyo koobabka, foomamka iyo codsiyada, ama xitaa maqaallo waxtar leh. Maadaama aan dhammaanteen ku wareegsannahay warqad, maxaad dib ugu isticmaali weyday?
Waxaad u beddeli kartaa dhar laga sameeyay kiimikooyin caan ah iyo suuf, jute, linen, dhogor, ama dhar xariir ah. Xariirta ka sokow, dharka dabiiciga ah ayaa ka jaban, raaxo leh in la xidho, oo neefsan kara. Si ka duwan sida dharka dardaro, dharka dabiiciga ahi waa nooleyaal oo uma baahna in la mariyo habka dardaaranka. Faa’iidooyinka badan ee badeecooyinkan ayaa ah inay si fudud u burburaan oo aysan soo saarin badeecooyin sun ah. Dhinaca kale, nylon, polyester, lycra, iwm. Waxaa lagu farsameeyaa farsamaynta dardaaranka waana dhar aan nooleyn karin.
Faa'iidooyinka agabyada nooleyn kara
Waxaa jira faa'iidooyin badan oo ku aaddan adeegsiga walxaha baaba'a leh. Aan aragno waxay yihiin:
Ma soo saaro qashin: Iyagu waa agab gebi ahaanba dabiici ah oo ay cuni karaan jeermisyada iyagoon dhib lahayn, taasina waa sababta aan ugu isticmaalo inaan ku hawlgalo wareegga noloshayda. Sidaa darteed, ma soo saarto qashin waayo muddo dheer kuma sii jirto qashin -qubka ama qashin -qubka.
Ma dhalinayso ururinta qashin -qubka: Waxay xal weyn u yihiin dhibaatooyinka bannaan ee ka jira qashin-qubka, taas oo ay ugu wacan tahay uruurinta agab aan nooleyn.
Way fududahay in la soo saaro oo la maareeyo: Waxaad ku samayn kartaa ku dhawaad ​​wax kasta oo leh maaddooyin baaba'a kara adiga oo aan yarayn tayada.
Kuma jiraan sun: adeegsiga walxaha nooleyn kara ma oggolaanayo ku -tiirsanaantaas adeegsiga agabyada kale ee u baahan isticmaalka tamarta sare iyo wasakhaynta aadka u daran.
Way fududahay in dib loo warshadeeyo: gabi ahaanba waa kuwo dib loo isticmaali karo umana baahna hababka murugsan ee daaweyntooda.
Ma yihiin kuwo casri ah: Waa suuq kor u sii kacaya oo aad iyo aad looga yaqaan.
Ma nijaaseeyaan: Haddii aan ka hadalno qashinkooda, agabyada nooleyaasha ah ayaa saamayn yar ku leh muuqaalka dhulka iyo deegaanka.
Wuxuu kaa dhigayaa mid aad u taageera.
Waxaan rajaynayaa in macluumaadkan aad wax badan uga baran karto agabyada noole -burburin kara iyo sifooyinkooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Deegaanka » Dib u warshadaynta » Agabyada nooleynaya
Farqiga u dhexeeya fayrasyada iyo bakteeriyada